Entsha evela eMendoza nasePérez-Reverte ukulangazelela ukwindla. | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi, Izaziso, Inoveli, Inoveli emnyama
Ewe singene julio, iyonke inyanga yehlobo, iiholide, iilwandle, ubushushu kunye neeholide. Okwam, obathiyileyo ubushushu, inyanga enesihogo nokuba yeyona indibonileyo ndizalwa namhlanje ... ezimbalwa. Ke sele ndicinga ngaye ukuwa. Kwaye ngoSeptemba nango-Okthobha, kukho izicwangciso, ngakumbi iindabaAba babini bevela kwii-greats (kunye nababhali endibathandayo) kwindawo yombhalo wesizwe, U-Eduardo Mendoza kunye noArturo Pérez-Reverte. Ndijonga ngokukhawuleza Ukumkani uyamkela y Isabotage, elesithathu lezihloko ezenza uthotho olumnyama lukaFalcó.
Ukumkani uyamkela, nguEduardo Mendoza
El Umvuzo weCervantes IsiCatalan 2016 UEduardo Mendoza ipapasha inoveli entsha eya kuthi ibethe ezivenkileni Septemba 4. Kwakhona noSeix Barral, Ukumkani uyamkela isisa kwiBarcelona ye 1968, apho ophambili, URufus Idabi, ufumana ikhomishini yakhe yokuqala njenge-nib kwiphephandaba. Ikhomishini ebaluleke kakhulu, leyo gubungela umtshato wesikhulu ekuthinjweni kunye nentombazana entle entle evela kuluntu oluphakamileyo.
Kodwa ngenxa yeziganeko ezithile, uBatalla wenza ubuhlobo nenkosana, ethi phakathi kwezinye izinto icele ukuba ibhale ingxelo yembali yayo ethile. Ixesha lokucinezelwa kwe-EISpain ukusuka kwiminyaka engama-60 Uza kuthatha isigqibo sokuba ahambe eRufo ENew York Akanayo mali, kodwa unethemba eliphezulu lokuphumelela ukuze enze into enomdla ngobomi bakhe.
Ngokuqinisekileyo sinokuyifumana Amava ombhali malunga naleyo minyaka kunye nolwazi lwakhe lwe-United States emva kobugcisa bakhe apho. Kwaye ke kukho izikhombisi kwi ukulingana ngokobuhlanga, i intshukumo hippy okanye ubufazi, njengokuba u-el intshukumo yesini okanye iindlela ezintsha zokubonisa inkcubeko.
Ukubhuqa, Ngu-Arturo Pérez-Reverte
Ngokupapashwa kwayo kucwangciselwe 3 ngo-Oktobha, yaza yaphinda yakhiwa kwakhona phakathi kwenoveli emnyama, eyimbali kunye neyothusayo isahlulo sesithathu kolu thotho lwaqala Falco kwaye ilandelwe eva. Umbhali waseCagagena, endibuye ndaphinda ndonwabile kumbuliso wokugqibela kwiNcwadi yeNgcaciso yaseMadrid, uyabavuyela abalandeli abaninzi U-Lorenzo Falco ngesi sihloko sitsha.
Okwangoku akukho nto ingako ngempikiswano yakhe. Siyazi kuphela, okanye mandithi, asazi Wenza ntoni uFalcó eParis Ngentwasahlobo yowe-1937 kwaye kukho nombuzo malunga ubunyani be EGuernica, umfanekiso owenziwe nguPicasso. Ke kwakhona iyelenqe kwaye kuyakubakho ukujija kunye nokujika okutsha, iingozi kunye nokuzonwabisa ngaphezulu kobumnyama koku iarhente / umcuphi / hlola kuloo minyaka yobunzima.
UPérez-Reverte uzokugqiba unyaka omkhulu wokubhala apho sele ekhanya khona Izinja eziqinileyo azidanisi, isihloko endihlala kude naso ngaphandle kwamathandabuzo. Uthotho lukaFalcó alukagqibi ukundikholisa, kodwa kuba isitayile sakhe besisoloko sisenza njalo, ndiza kuyifunda le nto Isabotage.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Entsha evela eMendoza nasePérez-Reverte ukulangazelela ukwindla.